Moto G4 Plus Vs Moto G5 Plus, isbedelka. | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Motorola, Mobiles, Noticias
Ayaa ahayd mid ka mid ah bandhigyada la shaaciyey lana filayo ee MWC 2.017. Cusboonaysiinta mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan bartamaha. Maaha wax aan micno lahayn ayaa sannado ku jiray «shanta ugu sarreysa» ee taleefannada casriga ah oo leh qiimaha ugu fiican ee lacagta.
Motorola Moto G, noocyadeeda oo dhan, wuxuu ahaa iibiyaha ugu fiican tan iyo markii uu ka soo muuqday suuqa. Sidaa darteed baarku aad ayuu u sarreeyaa. Waxaana jira culeys yar oo saaran Moto G5 Plus cusub haduu damacsan yahay inuu ku noolaado kii ka horeeyay. Ma guuleysan doontaa?
1 Moto G5 Plus ma maamuli doontaa inuu la socdo Moto G4 Plus?
2 Isbeddelada sidee u egyihiin?
Moto G5 Plus ma maamuli doontaa inuu la socdo Moto G4 Plus?
Sidee u dhacdaa Marka nooc cusub oo casriga ah uu ka muuqdo suuqa, isbarbardhiga waa lama huraan. Hubi wararka, isbeddelka iyo hagaajinta cusubi waxay la imaaneysaa iyadoo la tixgelinayo waxaan ognahay. Taasi waa sababta maanta Androidsis waxaan u tusi doonaa farqiga u dhexeeya labada Moto G Plus.
Jaleecada hore waxaa jira isbeddelo muuqda. Nooca cusub ee Moto G5 Plus, markan waxaa qoray Lenovo, sharad on isbedel ah ee design. Wax soo jiita dareenka muuqaalkiisa ugu sarreeya. Gaar ahaan markii loo tixgeliyey inuu yahay taleefanka "weyn" ee muhiimka ah ee dhexda.
Si loo hubiyo hagaajinta, ama farqiga u dhexeeya mid iyo nooc kale, waxaan ku tuseynaa muuqaal ahaan. Jadwalka soo socda waxaad ku arki kartaa dhinacyada ay Lenovo ku horumarisay Moto G oo leh sharadkeeda cusub. Waxaan arki karnaa in isbeddelka dhabarka ee caagga ah ee birta uusan ahayn kan keliya.
Tusaale Moto G4 Plus Moto G5 Plus
Nidaamka hawlgalka Android 6 Android 7
Gacaliye Snapdragon 617 Snapdragon 625
Kaydinta 16GB 32GB
Batariga 3.000 Mah 3.000 Mah
Kaamirada hore 5 Megapixels 5 Megapixels
Cámara trasera 16 Megapixels 12 Megapixels
Isbeddelada sidee u egyihiin?
Qaar ka mid ah sheekooyinka cusub ee qaabka cusub ee Motorola Moto G5 Plus ayaa ah wax lala yaabo. Yaraynta cabirka shaashadaada tusaale ahaan waa cajiib. Ka soo horjeedka isbeddelka noocyo badan oo sharad ku saabsan cabbirka Moto G4 hore. Moto G5 wuxuu yareeyaa shaashadiisa, laakiin waa wax taas jira Waxay u adeegtaa hagaajinta, sida ku cad abuurayaasheeda, qaabeynta iyo qabashada qalabka.
Sidoo kale ma aanan arkin wax horumar ah oo batteriga ah, laakiin beddelka processor-ka ayaa loo maleynayaa inuu sii fiicnaanayo. 3.000 mAh wuxuu ballan qaadayaa inuu xoogaa kala bixin doono qalab aad u habeysan. Moto G5 Pluskan cusub ma heli doonaa booskiisa suuqa? Jaleecada hore, waa taleefan casri ah oo aan jecel nahay oo aan horayba u rajeyneynay inaan tijaabino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto G4 Plus Vs Moto G5 Plus, isbedelka.
Jarmalka Dario Sanchez Roa dijo
Lenovo waxay aaminsantahay in kaliya hal sano oo cusbooneysiin ah loo daayo motorola, ay noqotay waali rajo la'aan ah, sidaa darteed nokia waxay qaadaneysaa dhul iyo waxa ku harsan kalsoonida taageerayaasheeda iyo macaamiisheeda, Lenovo naftaada u samee wanaag ama badal wanaag. siyaasad cusbooneysiinta ama ragga xun Waxaan ku dhaqaaqi doonaa iyo dhammaan waxyaabaha aan u qalmin ee nooc ka mid ah oo noqday dhexdhexaad.
Jawaab Jarmalka Dario Sanchez Roa
Google ma sii deyn doono kumbuyuutarro badan oo Pixel ah